सभामुखलाई घाेंक्र्याउन सांसद गंगा चाैधरी गुन्यु उचाल्दै राेष्टममा उक्लिन खाेजेपछि …..
September 8, 2021 N88LeaveaComment on सभामुखलाई घाेंक्र्याउन सांसद गंगा चाैधरी गुन्यु उचाल्दै राेष्टममा उक्लिन खाेजेपछि …..
काठमाडौं । सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा नाराबाजी गरेको नेकपा एमालेकी एक सांसद रोष्टममै उक्लिने प्रयास गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको पहिलो दिन बुधबारको पहिलो र दोस्रो बैठक एमाले सांसदहरुले अवरुद्ध गरे । बैठकपछि सहमतिको प्रयासमा छलफल पनि भएको थियो, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोग गरे गर्नुस्, नगरे प्रक्रिया अघि बढाउँछु’ भनेको एमाले सांसदहरु बताउँछन् । […]
कस्तो हुन्छ धनाढ्य बस्ने महंगो पेन्टहाउस ? नेपालमा कति पर्छ मूल्य ?
September 8, 2021 N88LeaveaComment on कस्तो हुन्छ धनाढ्य बस्ने महंगो पेन्टहाउस ? नेपालमा कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । ठूला शहरका भब्य अपार्टमेन्टको सवैभन्दा माथिल्लो तलामा बनाइएका आलिसान ‘पेन्टहाउस’ मा बस्‍नु धेरैजसो धनाढ्यका लागि सम्बृद्धिको सूचक हो । किनकी पेन्टहाउसमा जेजस्ता सुविधा हुन्छन र जति ठूलो स्पेश हुन्छ, त्यस्तो भब्यता कुनै पाँचतारे होटलको प्रेसिडेण्सियल स्वीटमा पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । पेन्टहाउस भनेको आलीसान स्वतन्त्र सुरक्षित र गोपनियताको प्रत्याभूति भएको आवासको प्रकार हो […]
अमेरिकाले पठायो एमसीसी बारे सरकारलाई जवाफ, परिमार्जन होला एमसीसी ?
September 8, 2021 September 8, 2021 N88LeaveaComment on अमेरिकाले पठायो एमसीसी बारे सरकारलाई जवाफ, परिमार्जन होला एमसीसी ?
काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारलाइै जवाफ पठाएको छ । भदौ १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ११ बुँदे जिज्ञासासहित ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको थियो । सरकारले एमसीसी संविधानमाथि हो होइन लगायत विषय समेटेर पत्र पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पठाएको हो । एमसीसी परिमार्जनसहित मात्र पारित गर्नुपर्ने माग […]
September 8, 2021 N88LeaveaComment on घनश्याम भुसाल एस पार्टीमा फर्किने अन्तिम तयारीमा !
काठमाडाैं । नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको ९एकीकृत समाजवादी०मा घनश्याम भुसाल फर्कने संभावना देखिएको छ । ०७५ जेठ २ गतेको सांगठनिक संरचनामा फर्काउने भनेको निर्णयलाई एमाले नेतृत्वले लत्याएपछि भुसाल चिढिंदै आएका थिए । उनले एमालेमा बस्न सक्ने बातावरण सकिएको भन्दै माधब नेपालकै पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०मा जाने तयारी गरेका निकट स्रोतले जानकारी दियो । उनि सहित अन्य […]
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो औकात अनुसारको व्यवहार बुधबारको संसदमा देखाएको टिप्पणी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमालेले बुधबार संसदमा देखाएको व्यवहार स्तरहीन भएको बताइन् । एमालेले सांसद झाँक्रीसहित १४ जना सांसदलाई गैरसांसदको संज्ञा दिएको छ । एमालेले ‘गैरसांसदलाई संसदमा राख्न पाइँदैन’ भन्दै […]
September 8, 2021 September 8, 2021 N88LeaveaComment on सभामुख सापकोटा एमालेसँग आक्रोशित, दाह्रा टाेकेर झम्टिन खाेजे (भिडियाेसहित)
काठमाडाैं । सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई संविधान सम्झाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नाराबाजी सहित रोष्टम घेराउ गरेका एमाले सांसदहरूलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) र (घ) सम्झाएका हुन्। एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको राष्ट्रपतिको पत्र संसदमा पढेर सुनाए लगत्तै विरोध गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले सभामुखले […]
माधव नेपालले मन्त्री पद बेचेको आरोप, कतिमा भयो डिल कस्ले खोल्यो पोल?
September 8, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले मन्त्री पद बेचेको आरोप, कतिमा भयो डिल कस्ले खोल्यो पोल?
काठमाडाैं । माधवकुमार नेपालले मन्त्री पद बेचेको खुलासा भएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालले मन्त्री पद बेचेको आरोप लगाएका हुन् । मंगलबार कास्की एमालेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले पार्टी फु टा उ न पद बाँडेको बताए। ‘मन्त्रीको पद बेच्न लागिरहेको तपाइहरुले पनि थाहा पाइरहनुभएको होला।’ उनले भने, ‘माधव नेपालका […]
सभामुखलाई एमालेको प्रश्न : दल विभाजनको मोतियार किन बनेकाे ?
September 8, 2021 N88LeaveaComment on सभामुखलाई एमालेको प्रश्न : दल विभाजनको मोतियार किन बनेकाे ?
काठमाडाैं । नेकपा एमालेले नेकपा एमालेले कारवाही गरेका सांसद बचाउन र एमाले टुक्रयाउन किन भूमिका निर्वाह गरेको भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रश्न गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई बचाउन र पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप लगाए । ‘नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई बचाउन र […]
अष्टलक्ष्मीको नाैटंकी : अल्पमतमा परेको सरकार विस्तार गरेर मन्त्री बनाउने होड
September 8, 2021 N88LeaveaComment on अष्टलक्ष्मीको नाैटंकी : अल्पमतमा परेको सरकार विस्तार गरेर मन्त्री बनाउने होड
हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले ) भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नयाँ दर्ता भएसँगै अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद्मा पाँच मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थप गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको शाक्यको शिफारिसमा प्रदेश […]